जब घरेलु जैविक मल, जैविक फोहोर कम्पोस्टि is आवश्यक छ।
कम्पोस्टिंग पशुधनको फोहोर हटाउने एक प्रभावकारी र आर्थिक विधि हो
तीन प्रकारका हिप प्रकारहरू छन्: सीधा, अर्ध-पिट, र पिट
उच्च तापमान, वर्षा, उच्च आर्द्रता, उच्च पानी तालिका क्षेत्रहरूको लागि उपयुक्त। सुख्खा, खुला र पानीको स्रोतसँग नजिक भएको ठाउँ छनौट गर्नुहोस्। २ मीटर उचाई १.२-२ मीटर लम्बाइका स्ट्याकि wid चौडाइहरू कच्चा मालहरूको मात्राको आधारमा प्रबन्ध गरिन्छ। स्ट्याक गर्नु अघि माटोलाई सुदृढ पार्नुहोस् र सीपज रसलाई अवशोषित गर्न घाँस वा टर्फको एक तहको साथ सामग्रीको प्रत्येक तहलाई छोप्नुहोस् .. प्रत्येक तह १ 15-२4 सेमी बाक्लो हुन्छ। वाष्पीकरण र अमोनिया वाष्पहार घटाउनका लागि तहहरूको बीचमा पानी, चूना, फोहोर, मल, इत्यादिको सही मात्रा थप्नुहोस्। कम्पोष्टि oneको एक महिना पछि, कम्पोस्ट खोल्नको लागि वाकि walking डम्पर ड्राइभ गर्नुहोस् र सामग्री अन्ततः विघट नभएसम्म नियमित रूपमा ढेरलाई पल्टाउनुहोस्। पानीको सही मात्रा माटोको आर्द्रता वा सुख्खाको आधारमा आवश्यक हुन्छ। कम्पोस्टिंग दर asonsतुहरूसँग फरक हुन्छ, सामान्यतया summer- months महिना गर्मीमा २ महिना र जाडोमा 3-4- months महिना। ।
आधा पिट प्रकार
यो प्राय: वसन्त र जाडोमा प्रयोग गरिन्छ। एक lying- foot फिट गहिरो प्वाल dig-6 फिट लामो र -12-१२ फिट लामो खन्नका लागि तल्लो तल्लो स्थान छनौट गर्नुहोस्। क्रस भेन्टहरू खाडलको तल र भित्तामा सेट अप गर्नुपर्छ। कम्पोस्टको शीर्षमा १००० किलो सुक्खा पराल थप्नुहोस् र माटोले यसलाई छाप लगाउनुहोस्। कम्पोस्टिंगको एक हप्ता पछि, तापमान बढ्छ। एक slotted डम्पर को उपयोग गरेर, चिसो पछि 5-7 दिन को लागि किण्वन रिएक्टर समान रूप मा बारी, र कच्चा माल पूर्ण रूपमा विघट नभएसम्म कम्पोस्टिंग जारी।
सामान्यतया २ मिटर गहिरो, भूमिगत प्रकार पनि हो। स्ट्याकिंग विधि आधा पिट विधिसँग मिल्दोजुल्दो छ। हावाको सम्पर्कमा सामग्री बनाउन विघटनको क्रममा डबल हेलिक्स डम्पर प्रयोग गर्नुहोस्।
उच्च तापमान anaerobic कम्पोस्टिंग।
उच्च-तापमान कम्पोस्टिंग एक प्रमुख हानिरहित तरीका जैविक फोहोर, विशेष गरी मानव फोहोरको निपटानको लागि हो। जीवाणु, अण्डा र पराल र मलमूत्रमा घाँसको बीउ जस्ता हानिकारक पदार्थहरू उच्च तापमान उपचार पछि मारिन्छन्। उच्च तापक्रम एनारोबिक कम्पोस्टिंग २ तरिकाहरू, फ्ल्याट हिप प्रकार र अर्ध-पिट प्रकार हो। कम्पोस्टिंगको टेक्नीक साधारण कम्पोस्टको जस्तै छ। तथापि, परालको विघटनको गति बढाउन, उच्च तापमान कम्पोस्टले उच्च तापमान सेल्युलोज विघटन ब्याक्टेरिया थप्नु पर्छ, र तताउने उपकरणहरू सेट अप गर्नुपर्दछ। चिसो ठाउँहरूमा एन्टिफ्रिज उपायहरू लिनुपर्दछ। उच्च-तापमान कम्पोस्टिंगले धेरै चरणहरू पार गर्दछ: तातो-उच्च-कूलिंग-सड्न। हानिकारक पदार्थहरू उच्च तापमानमा नष्ट हुनेछन्। यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईंसँग एक विशेष सिमेन्ट वा टाइल कम्पोस्टिंग क्षेत्र छ।
मुख्य घटक: नाइट्रोजन।
उप-घटकहरू: फास्फोरस, पोटेशियम, फलाम।
मुख्यतया नाइट्रोजन मलमा प्रयोग गरिन्छ, कम एकाग्रता, जड प्रणालीलाई नोक्सान गर्न सजिलो हुँदैन। यो फूल प्रयोग अवधिको अवधिमा भारी प्रयोगको लागि उपयुक्त छैन। किनभने फूल र फलहरूलाई फस्फोरस, पोटासियम, सल्फरको धेरै आवश्यकता हुन्छ।
घरेलु जैविक मलको लागि कच्चा माल।
हामी निम्न कोटिहरूलाई घरका जैविक मलको लागि कच्चा मालको रूपमा छनौट गर्न सिफारिस गर्दछौं।
१. कच्चा माल लगाउनुहोस्
संयुक्त राज्यका धेरै ठूला शहरहरूमा, पातलो पातहरू स collect्कलन गर्ने कामदारहरूलाई सरकारले पैसा दिन्छ। जब कम्पोस्ट परिपक्व हुन्छ, यो कम मूल्यमा किसानहरूलाई बेचिन्छ। यो उष्ण कटिबन्धीय इलाकामा नभएसम्म, पातलो पातहरूको प्रत्येक तह 5-१० सेन्टीमिटर मोटो, स्तरयुक्त पातलो पातहरू भुँइमा cover० सेन्टीमिटर मोटाईमा बनाउनु उत्तम हुन्छ। पातलो पातहरूको बिभिन्न तह बीच अन्तराल माटो जस्तै मल्टेनले ढाक्न आवश्यक छ, जुन क्षय हुन कम्तिमा to देखि १२ महिना लाग्न सक्छ। माटोलाई ओसिलो राख्नुहोस्, तर माटोको पोषण नोक्सानी रोक्न यसलाई धेरै पानी नदिनुहोस्।
यदि सडदै फलहरू, बीउहरू, बोक्रा, फूलहरू, आदि प्रयोग गरियो भने, क्षय केहि अलि बढी लिन सक्दछ। फास्फोरस, पोटेशियम र सल्फर अधिक हुन्छ।
बीन केक, सिमी दही, आदि
डिग्रेसि condition सर्तमा निर्भर गर्दै कम्पोष्टिing पाक्नको लागि कम्तिमा to देखि months महिना लाग्छ। परिपक्वता द्रुत गर्ने उत्तम तरिका भनेको कीटाणुहरू थप्नु हो। कम्पोस्टिंगको मापदण्ड मध्ये एक हो कि कुनै गन्ध छैन। यसको फास्फोरस, पोटाशियम र सल्फर सामग्री विरहित कम्पोस्टभन्दा उच्च छ, तर फल कम्पोस्ट भन्दा कम छ। कम्पोस्ट सोया वा सोया उत्पादनहरूबाट सिधा बनाईन्छ। सोयाबीनले कम्पोस्ट लिन अधिक लिन्छ किनभने उनीहरूको उच्च फ्याट सामग्रीको कारण। जैविक फ्याट बनाउने साथीहरूको लागि, यो अझै एक वर्ष वा वर्षौं गन्ध हुन सक्छ। त्यसकारण, हामी सुझाव दिन्छौं कि सोयाबीन राम्ररी पकाइयो, बलेको हो, र भिजेको छ। यसले गर्भवती समयलाई घटाउन सक्छ।
२. जनावरको मलमूत्र
भेडाहरू र गाईवस्तु जस्ता जडिबुटीको मल, जैव जैविक मलको किण्वन र उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ। थप रूपमा, कुखुराको मल र कबूबरको गोबर फास्फोरस सामग्री अधिक छ, यो पनि राम्रो विकल्प हो।
नोट: जनावरको मलमूत्र जुन प्रबन्ध गरिएको छ र एक मानक बोटमा रिसाइकल गरिन्छ जैविक मलको लागि एक कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि घरमा उन्नत प्रशोधन उपकरणको अभावका कारण हामी मानव मलमूत्रलाई जैविक मल बनाउन कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न वकालत गर्दैनौं।
Natural. प्राकृतिक जैविक मलको पोषण मिट्टी
कामुकता: प्रजनन योग्य, तर उच्च चिपचिपापन। बेस मलको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, एक्लो होइन।
पाइन सुई जरा
जब पातलो मोटाई १०-२० सेमी से अधिक हुन्छ, पाइन सुईलाई जैविक मलको लागि एक कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
कम राल सामग्रीको साथ रूखहरू, जस्तै खस्ने फेदर फर, राम्रो प्रभाव गर्दछ।
मल अधिक प्रभावी छ। यद्यपि यो सिधा प्रयोग गर्न मिल्दैन र अन्य जैविक सामग्रीसँग मिसिन सकिन्छ।
जैविक पदार्थ पूर्ण विघटित हुनु पर्ने कारण।
जैविक पदार्थको विघटनले माइक्रोबियल क्रियाकलाप मार्फत दुई मुख्य परिवर्तनहरू निम्त्याउँछ: जैविक पदार्थको विघटनले मलको प्रभावकारी पोषक तत्व बढाउँदछ। अर्कोतर्फ, कच्चा मालको जैविक पदार्थ कडा देखि नरममा नरम हुन्छन्, र बनावट असमानबाट वर्दीमा परिवर्तन हुन्छ। कम्पोष्टि ofको प्रक्रियामा यसले झारको बीउ, ब्याक्टेरिया र धेरैजसो अण्डाहरूलाई मार्छ। त्यसकारण, यो कृषि उत्पादनको आवश्यकतासँग बढी मेल खान्छ।